असाड १०, २०७५
जनता हिजो पनि निरपेक्ष थियो, आज पनि निरपेक्ष छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जनताको निरपेक्षता वडो खतरनाक
संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य नेताहरु समृध्दिको नारा लगाउन व्यस्त छन । प्रेसलाई सरकारले आफनो कब्जामा लिइ सकेको छ । यसभन्दा अघि नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष रही सकेका डा. महेन्द्र विष्टले नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तहुने वित्तिकै ।।।पत्रकारहरुले (राजनीतिक पदाधिकारीहरुलाई) प्रश्न सोध्न पाउने, तर मिलाएर सोध्नुपर्ने’ वताएका छन । मिलाएर सोध्ने भनेको के हो ? कार्यकारी अध्यक्ष विष्टले व्याख्या गरेका छैनन । यस्तो लाग्दछ समृध्दिका नाममा देश खेलाचीमा चलेको छ । केरुङबाट रेल आउने हल्ला गर्यो, एक चरण वितायो, रक्सोलबाट रेल आउने वतायो, अर्को चरण वितायो । मानिसहरुको मनमा पर्न थालेको छ नेपालको वामपन्थी सरकारले भारत र चीनबाट आउने रेलमा राखेर समृध्दि ल्याउने भएकोछ । समृध्दिको यो कथा सुनेर निकै छोटो समयमा नै जनता सरकारसंग दिक्क भै सकेका छन । सरकारको यो शैली २०१७ सालपछि निरंकुश राजाले प्रयोग गरेको शैली भन्दा फरक छैन । अव कुनदिन देखि गायक गायिकाले समृध्दिको गीत गाउन थाल्दछन र कलाकारहरुले समृध्दि शव्दको नाट्य रुपान्तर गर्नेछन । यो अभियानमा कुनै नौलोपना छैन । कुनै हार्दिकता पनि छैन । जनता हिजो पनि निरपेक्ष थियो, आज पनि निरपेक्ष छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जनताको निरपेक्षता वडो खतरनाक हुन्छ । राज्यको व्यवसायमा जनताको सहभागिता भएन भने अन्ततः त्यसले सरकारलाई नै असफल वनाइ दिन्छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले जनताको नाममा अर्वौं र खर्वौंको बजेट तर्जुमा गर्दछ । तर, त्यसमा जनताको सहभागिता नहुने हुनाले बजेटहरु निष्प्रभावी हुन्छन । यो सत्यलाई सरकारले देशमा भएको यति ठूलो परिवर्तनपछि पनि वुझन सकेको छैन । यो हाम्रो देशकै दुर्भाग्य हो ।देशमा संघीय सरकार गठन भएको छ । संविधानको मांग अनुसार प्रादेशिक सभा र सरकारहरु गठन भएका छन । नेपाल राष्ट्रको इतिहासमा नै पहिलोपटक संविधानले स्थानीय निकायहरुलाई आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक हिसावले वलियो वनाएको छ । तर, जुन जुन क्षेत्रमा यसका असरहरु देखिनुपर्ने हो त्यो देखिएका छैनन । देशले नाममा मात्रै गणतन्त्र खोजेको होइन । गणतन्त्रमा जनताको सर्वोपरिता स्थापित हुने हुनाले नेपाली जनताले त्यसलाई आत्मसात गरेको हो । यति कुरा सवैले वुझेका छन । नवुभ्mने कोही छैन । तरपनि, नवुझे झै गर्ने र तर्किने नेता र कर्मचारीहरुको वथान यथावत छन । न त, सोचे अनुसार स्थानीय तहमा नियोजित काम हुन सकेको छ, न त प्रादेशिक तहमा समन्वय हुनुपर्ने स्थानीय तहका संघीय आवश्यकता नै परिभाषित हुन सकेको छ । सरकारसंग पैसा छैन । त्यसो भनेर अहिले शुरु भएको संवैधानिक प्रक्रियालाई स्थगितगर्न त मिल्दैन । यसको समन्वय कसरी हुने हो ? सरकारसंग त्यसको कुनै प्रोटोटाइप छैन । अहिले हरेक क्षेत्रमा वेथिति छ । संघीय सरकार सुन तहकीकातको मुद्दामा महिनौंदेखि अलमलिएको छ । सवै नेपालीलाई थाह छ सुन कहाँबाट आउँछ र कहाँ जान्छ । यसमा को को लागेका छन । तैपनि, सरकार सुनको नौटंकी देखाउँछ । कर प्रशासन, आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक जस्ता आधारभूत विषयमा प्रादेशिक अधिकार र स्वामित्व स्थापितगर्न अनकनाउँछ सरकार । यो अवस्थामा संघीय व्यवस्थाको सफलता विवादास्पद हुन्छ । यो सबै अव्यवस्थाको जिम्मेवार केन्द्रमा रहेको संघीय सरकार र यसका नेताहुन । अधिकारलाई संकुचनमा राखेर उनीहरु राष्ट्रको शासनगर्न चाहन्छन । स्थानीय र प्रादेशिक तहमा अधिकारको वाँडफाँड भयो भने आपूm कमजोरहुने भावनाले राजनीतिज्ञ र उच्चपदस्थ कर्मचारीतन्त्र भयातुर देखिएको छ । अहिलेका राजनीतिक दलका एकजना नेताले पनि संघीय शासनका अवधारणा वुझेका छैनन । यस्तो स्थितिमा हामीकहाँ संघीय शासनको भविष्य के होला ? यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।अहिलेसम्म कर्णाली वाहेक अन्य कुनै प्रदेशले आफनो प्रदेशको नामाकरणगर्न सकेका छैनन । कति ठाउँमा प्रदेशको राजधानी विवाद पनि उठला । नामाकरण र राजधानी साना विषय होइनन । प्रदेशको नाम त्यहाँका सवै निवासीहरुको पहिचानको प्रतिनिधित्व हुनेगरी, चित्त वुझनेगरी र जनजिब्रोमा चढने गरी राख्नु पर्दछ । यस प्रकारको सोच अहिलेका कुनैपनि राजनीतिक दलमा देखिएको छैन । केन्द्रीय शासनमा रहेका दलहरुमा सवभन्दा बढी यो चेतना आउनुपर्ने हो । यसका लागि सवभन्दा वढी कार्यकर्ताको परिचालन उनीहरुबाटै हुनुपर्ने हो । तर, एकताको दलदल र दंगलमा फँसेका एमाले र माओवादी यतातिर निस्पृह देखिएका छन । एकतासंगै उठेका उनका आ–आफना राजनीतिब मुद्दा यति सघन छन कि त्यसलाई छिमल्नु दुवै पार्टीका नेताका लागि हाडेओखर टोक्नु वरावर भएको देखिएको छ ।साँच्चै भन्ने हो भने, २ नम्वर प्रदेश र अन्य प्रदेशका मधेश प्रभावित क्षेत्रमा संघीय शासनप्रति जुन आकर्षण देखिएको छ, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा त्यो देखिएको छैन । खासगरेर, पहाडी क्षेत्रबाट प्रादेशिक समाचारको पर्याप्त प्रवाह भएको छैन । प्रादेशिक आवश्यकताहरुका वारे उठेका आवाजहरु सवैतिर नसुनिदासम्म कुनैपनि प्रदेशको आधारभूत आवश्यकताबारे केही भन्न सकिदैन । सरकारमा रहेका र नरहेका पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वले आफना सामिप्यमा रहेका पत्रकारहरुलाई प्रादेशिक महत्वका सूचना र समाचारहरुको प्रवाह वढाउन सल्लाहदिने हो भने त्यो एउटा गतिलै काम हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा कुनैपनि पत्रकारले स्वतन्त्र हिसावले कामगर्ने वातावरण छैन । राजनीतिको खेलमा सवै संचारकर्मीहरु अल्झिएका छन । अहिलेको पत्रकारिता खुला पनि छ र वन्द पनि छ । अघि उल्लेख गरिएकै छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा नेता जसलाई प्रश्न सोधेपनि ।।।मिलाएर’ सोध्नु पर्दछ ।अहिलेको यो तरंगित अवस्थालाई चिर्दै दुइ नम्वर प्रदेशका वुध्दिजीवीहरु, राजपा–नेपाल, फोरम र अन्य दलका नेताहरुले वर्तमान अवस्थाको सही व्याख्या गरेर दुइ नम्वर प्रदेशका जनतालाई मात्रै होइन, सवै प्रदेशमा प्रादेशिक एकताका लागि राजनीतिलाई मजवूतगर्ने सूत्रको निर्माणगर्न नसक्ने थिएनन । तर, मधेशका नेताहरु मध्ये आपूmलाई वलिया भन्नेहरु सरकारमा गएका छन । राजपाका केही नेताहरु सरकारमा जाने वहानाबाजी खोज्दैछन । हालका प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो मधेश आन्दोलनका बेला चलाएको जिव्रो मधेशका मैं हूँ भन्ने नेताले बिर्सिएका छन । आफनो स्वाभिमान जोगाउन नसक्ने नेताहरु बारम्बार अपमानित भएका छन र पनि सरकारमा जान जतिसुकै वेला निहुरिन्छन भने प्रदेश कसले वनाउँछ ?